Dhamaan Spam - Wada hadal yar oo leh dhexdhexaad
Internetka ayaa daadad la leh farriimaha spam ee soo ururiyay sanduuqyada emailka badan ee emailka. Inta badan boosteejooyinka spam waa dhibsado, sidaa daraadeed waxay u baahan yihiin in la tirtiro ama xannibo si ay u yareeyaan joogtada ah ee soo noqnoqda si ay u isticmaalaan waqtiga iyo tamarta milkiilaha koontada.
Macluumaadkan, Michael Brown, oo ah 10 Semt Maamulaha Guusha Macaamiisha, wuxuu wadaagayaa mawduucyada ku saabsan emaylka spam ee saameeya badiba dadka isticmaala emails adduunka oo dhan.
Waa maxay Spam Email?
Fariin aan la aqbali karin ee soo galey emailka galka guud ahaan waxa loola jeedaa emailka spam. Faahfaahin dheeraad ah oo ka mid ah emailka spam waxay ku lug leedahay nuqullo fariin ah oo loo soo diro email ahaan si ay isku dayaan inay ku qasbaan dadka la xakumay ee aan dooran inay fariin u helaan si ay u helaan. Emailka spam weynaa wuxuu ka kooban yahay xayeysiin ganacsi oo shaki ah
Qaar ka mid ah farriimaha aan la rabin ha u gudbin boostada spam emails sababtoo ah ma aysan soo xaadirin sanduuqa. Tusaale ahaan emailadaas aan la isku haleynin waxaa ka mid ah xiriir joogta ah oo lumay oo ka soo baxa hal maalin si aad u sheegtid hello via email wuxuu noqon karaa e-mail spam ah oo aan sabab u beenin.
Waa maxay sababta loo yaqaan Spam?
Ereyga" spam "ayaa guud ahaan la rumeeysan yahay in laga soo bilaabo aqbalaadda aan joogtada ahayn ee erayga" spam spam spam spam, spam spam spam spam, spam quruxsan, spam cajiib ah, "by Monty Python oo ereyadiisu ay qiimo lahayn, haddana qaar ka mid ah dadku waxay u diraan emailka Jaamacadda Southern California kuwaas oo xiriir la leh macaamiisha e-mailka ee hilibka Spam, qofna kuma jeclayn spam hilibka, qofna ma cuno spam hilib, mar walbana waa la riixaa miiska inkastoo ay dhadhan yihiin mararka qaarkood sida 1% emaylka spam ee dhulka soo galaya
Farriimaha spam ayaa laga yaabaa inay ku dhejiyaan sanduuqa boosteejada sababtoo ah liis gareynta laga sameeyay bogga ama liis gareynta email-ka ee shirkadda si loo fududeeyo casriyeynta la soo xulay. Iyadoo loo marayo qandaraas-siinta, isticmaalaha wuxuu helayaa graymail kaas oo ah emailka caadiga ah ee spam ee soo socda soo-jeedinta ula kac ah ee user.
Ma buufiyaa Dhibaato
Tirakoobka ku saabsan emails qashinka ah ee noqonaya been abuur ah waxay muujinaysaa in emailada spam ay dhibaatooyin badan u keenaan user. Marka laga reebo luminta wakhtiga isticmaalaha sababtoo ah waxay had iyo jeer u baahan yihiin taxadar marka ay soo galaan sanduuqa, emails aan loo baahnayn waxay cunaan badanaa xawaaraha. Inkasta oo qiimaha ugu dhow ee aan la dirin, waxaa dhici karta in e-mailka spam uu ku kici karo isticmaalaha.
Sida loo Joojiyo Spam
Waxaa jira faragelin fara badan oo lagu dalbado internetka si ay ula dagaallamaan farriimaha spam ee ah in ay gaaraan khadka emailka. Shakhsiyaad iyo ururo badani waxay u qaataan inay yihiin dadaal culus oo ay ku soo celin lahaayeen sanqadhooda fariinta. Si kastaba ha ahaatee, la'aanta sharciyada sharciyeynta ah ee internetka ayaa soo bandhigaya tallaabooyinka sida wax looga qabanayo dhibaatooyinka si loo tirtiro dhibaatada guud ahaaneed. Qawaaniinta udubdhexaadka ah ee shirkadaha internetka ah sida iska ilaalinta ka-qaadista macaamiishooda waa talaabo ku wajahan hoos u dhaca macaamilka
Mid ka mid ah habka lagu talinayo in looga hortago fariinada spam waa iyada oo la isweydiinayo cusboonaysiinta macluumaadka ka yimid bogagga aan wax badan ku kordhin isticmaalaha. Isticmaalayaasha ayaa sidoo kale dooran kara in la tirtiro oo la xakameeyo fariimaha aan loo baahnayn ee loo yaqaan spam Source .